Manoatra Lavitra Noho Ny Lemaka Maitso Any an-Tendrombohitra Ireo ‘Jailoos’ Ao Kyrgyzystan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2016 3:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, bahasa Indonesia, Italiano, English
Mpitaingina soavaly mitazana ny hatsaran'ny tendrombohitra ao Kyrgyzystan. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Nanamarika ity herinandro ity i Kyrgyzystan tamin'ny faran'ny Lalao Mpifindrafindra Monina Erantany nataony, nampiaiky indrindra tamin'ny nahazoany ny laharana ambony indrindra tao anaty lisitry ny medaly, nandritra ilay lalaony laharana amin'ny Lalao Olaimpika ary tamin'ny nampiantranoany ny lehilahy mahery indrindra ao Hollywood Steven Seagal izay voasariky ny hakanton'ny akanjon'ny mpifindrafindra monina (nomady) mpiady.
Fa tsy ny fifaninanana fanatanjahantena iraisam-pirenena ihany no hany fomba ataon'ireo mponina ao amin'ilay firenena Azia Afovoany ahitana mponina miisa enina tapitrisa mba hahatsiarovana ny lovany.
Na Kyrgyzy vitsy dia vitsy ao Kyrgyzystan aza no manana fomba fiainana mpifindrafindra monina mandavantaona, velona tsara tokoa ao anatin'ny vanintaona mafàna ny fifindrafindrà-monina matetika, vanintaona izay itànan'ireo kijànan'ny andro mafàna ao amin'ny firenena ny anjara toerany amin'ny fampiantranoana toeram-ponenana malefadefaka, soavaly mahafinaritra ary fianakaviana an-tapitrisany izay namela ny fonenany any amin'ireo lohasaha amin'ny faritra ambany ho any amin'ny fahalehibiazan'ny ambanivohitra.
Soavaly. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Ampahany tafiditra tanteraka amin'ny traikefa Kyrgyzny Jailoo, ary mba hiainana ny kolontsaina sy ny tantaran'ireo vahoaka Tiorka tsy mba mifikitra aminà toerana iray no handaniana fotoana amin'ireny lembalemba avo toerana ireny.
Midika fonenana ho an'ny mponina maro ao amin'ny firenena ny rivotra maranitry ny tendrombohitra , ny rano madio manganohano izay mikoriana amin'ny renirano mangatsiaka ary ny tendrombohitra rakotry ny ranomandry amin'ny elanelana tsy lavitra azy.
Raha atambatra, itoeran'ny fantatra amin'ny fomba ofisialy ho toy ny saha fihinanam-bilona rehefa fahavaratra ny 3.9 tapitrisa hektara sasany amin'ny faritany ao amin'ny Repoblika Kyrgyz
Ary…soavaly bebe kokoa. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Raha vantany tonga ao amin'ny jailoo, miparitaka ho ranomasin'ahitra maitso ny fitohanan'ny fifamoivoizana, ny hafaingam-pandehan'ny aterineto ary izay rehetra endrika ivelany manamarika ny fiainana an-drenivohitra, ravahan'ireo farihy an-tendrombohitra tsindraindray sy ny faribolana avy amin'ny setrok'ireo Yurts (trano bonetra nentim-paharazana).
Lasa ny fahazaran'ny tanàna, ary raha ny fitomboana miandalan'ny angovo fanolo ao Kyrgyzystan dia midika fa ny ankabeazan'ny trano bonetra natao ho an'ny mpizahatany dia mampiasa takamoa iray avokoa, izay mety ho hany mba ananan-dry zareo. Ao anatin'ilay vaninandro antsoina hoe nomerika!
Mivoaka ny ao anatin'ny siny kymyz izay fanamafisam-piainana. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Raha milamina ny fiainana jailoo, dia feno asa mafy ihany koa izany. Amin'ny fiposahan'ny masoandro ny vehivavy no mitery ronono, raha ny lehilahy kosa dia mety manangona ireo soavaly hiraoka ahitra any an-tendrombohitra ambonimbony kokoa.
Avy amin'ny ronono, mamokatra zavatra isan-karazany vita amin'ny ronono ny vehivavy ahitana ny kurut (vokatra masira vita avy amin'ny rononon'omby), kaymak (ronono mandry), ary boorsok (menakely nentin-paharazana). Ity farany dia miaraka tsara mihitsy amin'ny kaymak mafana eraky ny sotrokely .
Amin'ny fiheverana dika manokana ara-kolontsaina, na izany aza, ny kymyz dia zava-pisotro mahery masirasira vita avy amin'ny ronono nahotrika, fantatra tsara amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana omeny sy ny fisian'ny alikaola zara raha misy ao anatiny mandrakariva.
Tsara miaraka amin'ny zavatra rehetra ny Kaymak, na ronono mandry. Avy amin'i Elita bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Lazaina indrindra ny kymyz hoe manamafy ny hery fiarovana anaty ary manalavitra aretina maro mahafaty, izay manazava ny antom-pisian'ny ”toerana fitsaboana” kymyz amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena. Mifanojo amin'ny vanim-potoana fara-tampon'ny jailoo, manodidina ny volana May ka hatramin'ny faran'ny volana Jolay ny fara-tampon'ny fanjifàna ilay zavapisotro ka hatramin'ny farany ny zava-pisotro.
Tompon'ny fahaizana ny kymyz foana ireo foko Jailoo, ary mifaninana mba hanamboatra ny labiera tsara kokoa aza ireo jailoo hafa. Ny karazana zava-maniry marobe ao amin'ny firenena– samy hafa avy amin'ny saha iray mankany amin'ny saha iray hafa — dia singa iray monja lazaina ho misy fiantraikany amin'ny tsiron'ilay zava-pisotro.
Zavatra mahasoa nahotrika elaela kokoa. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Mampiala voly ny tenany ireo lehilahy Jailoo, amin'ny filalaovana ny ulak tartysh, lalao nasionaly ao Kyrgyz , na Kok-Boru mba hisorohana ny olana andavanandro toy ny tsy fananana asa, izay tena miely be, amin'ny fotoany malalaka.
Heverina ho lalao mampidi-doza ny ulak, izay hanaovan'ny lehilahy mpitaingina soavaly miisa 24 ka hatramin'ny an-jatony fifaninanana mba hahazoana ny fatina ondry izay mety hahatratra 45 kilao. Ity lalao ity, fantatra amin'ny anarana hoe Buzkashi ao Afghanistan, dia iray amin'ireo lafiny mahery setra indrindra amin'ny fiainana any an-tsaha fihinanam-bilona.
Lehilahy mpitaingina soavaly mifamory hilalao ny Ulak Tartysh, na Kok-Boru. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov by sary rehetra.
Ampahany ao ambadik'ireo jailoo mijanona ary nasandratry ny fizahantany avy amin'ny hetsika malaza Fiarahamonina Mifototra Amin'ny Fizahantany, manana ny iray amin'ireo sehatra fizahantany haingam-pitombo erantany i Kyrgyzystan. Ho an'ireo mpizahatany avy any Andrefana na manodidina ny faritra Sovietika taloha, ny fakàna fiainana mpiandry ondry tsotra mandritra ny andro vitsivitsy tsy voahelingelin'ny WhatsApp dia sady marevaka no mahafa-po.
Ary avy eo, ao aorian'ny fodian'ny masoandro handao ny jailoo sambatra ary fahatongavan'ny alina ho toy ny lamba firakotra midadasika, volory mainty voaravaka kintana an-tapitrisa mamirapiratra, toy izany koa ny hevitra hoe tsy ny tany ambany tongony irery ihany no fananan'ny vahoaka Kyrgyz, fa ny lanitra eo amboniny koa.
Trano bonetra. Trano ho an'ny fahavaratra. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.
Kyrgyzystan: toerana mahafatifaty. Avy amin'i Elita Bakirova na Erlan Bakirov ny sary rehetra.